Nooca Cusub ee Dukaanka Cusub, ee loogu talagalay Baahida Degmooyinka Minnesota
Minnesota Foundation Initiative Foundation
Sannadkii 2015, Shirkii Cedar ee New Prague ayaa albaabada u xidhay. Waxay ahayd kaliya 100% caanaha wax soo saarka caanaha laga helo gobolka. Kendra Rasmusson, oo asal ahaan ka soo jeeda New Prague, ayaa dhowaan dib ugu soo celiyay aagga magaalooyinka Twin Cayo iyada oo ninkeeda Paul ah. Waxay raadinayaan meel ay la socdaan dareen xoogan oo bulshada ka mid ah oo ay ku kici karaan qoysaskooda. Xiritaanka Cedar Summit Farm wuxuu keenay Rasmussons in ay bilaabaan sahaminta haddii ay tani ahayd fursad ay ku furto suuq geyntooda maxaliga ah.
"Marwalba waan ogaa in aan noqon lahaa milkiilaha ganacsiga yaryar, waa uun su'aal ah marka," ayuu yiri Rasmusson. Bishii Oktoobar ee sannadkii 2015, waxay fureen Suuqa Beeraha ee waddada weyn ee magaalada Prague.
"Tani waa nooc ka mid ah hal-abuurnimada muhiim u ah dhaqaalaheena miyiga ah ee hore u sii soconaya." -PAM BISHOP, MADAXWEYNE VICE HORUMARKA DHAQAALAHA, GANACSIGA MINNESOTA SIDA LAGU QAATO
Market Farmhouse ma aha dukaanka raashinka caadiga ah. "Ugu horreyn, waxaan bilaabay inaan ka fekerno furitaanka dukaanka dhaqameed ee soo saari doona maxaliga iyo wax soo saarka beeraha, taas oo ku salaysan sahan suuq-gareeyn ah, waxaan ognahay inay jiraan baahi," ayuu yiri Rasmusson. "Si kastaba ha ahaatee, sahankan ayaa sidoo kale tilmaamay in wax ka badan wixii kale, dadku waxay doonayeen dukaanka bixiya saacado ku haboon."
Ugu dambeyntiina, waxay ka heleen waxyaabo ka soo baxay 24/7 oo ah qaabka tababarka shaqada. Iyada oo la abuuro dukaamo xubin ka ah oo xubnaha oo dhan ay helaan xubin muhiim ah, xubnaha ayaa dukaanka u adeega mar kasta oo ay u baahdaan. "Waan arki karnaa qaabkan dukaanka ah ee lagu dhexdhexaadiyay bulshooyinka kale ee miyiga ah, oo loo qoondeeyay wax kasta oo baahida bulshada gaar ah leh," ayuu yiri Rasmusson. "Halkan, waxay ahayd helitaanka wax soo saarka maxalliga ah iyo kan dabiiciga ah. Halka, xitaa, roonaanta waa muhiim; dadku ma rabaan in ay ku haystaan 20 mayl dukaanka cuntooyinka dabiiciga ah. "
"Tani waa nooc ganacsi oo xiiso leh," ayuu yiri Minnesota Foundation Initiative Foundation (SMIF) madaxweyne kuxigeenka horumarinta dhaqaalaha Pam Bishop. "Iyada oo macaamiil dukaanno badan oo waawayn ay ka fariisteen iyo baahida sii kordheysa ee cuntada maxaliga ah, tusaale ahaan sida Farmhouse Market ayaa macno weyn u leh ganacsatada cusub ee doonaya inay buuxiyaan baahida jirta. Tani waa nooc ka mid ah hal-abuurnimo oo muhiim u ah dhaqaalaheena miyiga ah ee hore u soconaya. "
Rasmusson ayaa deyn ka heshay Sanduuqa Dhibcaha Dakhliga Bulshada ee SMIF. Waxa aasaasay ururka McKnight Foundation 1980-yadii, oo ay la socdaan shan xarumood oo kale oo ah Minnesota Initiative Foundation, si loo xoojiyo bulshooyinka reer miyiga ah si ay u helaan xal u gaar ah baahida horumarinta dhaqaalaha. Mashruuca Southern Initiative Foundation wuxuu bixiyaa deyn iyo sidoo kale kaalmo farsamo oo hal-hal ah. Kendra ayaa la shaqeeyay Takhasusle ganacsi SMIF John Katz si uu u dejiyo QuickBooks si uu u maareeyo cashuurta iyo xiriirka ganacsiga iyada oo in ka badan 15 iibiyeyaasha maxaliga ah ee ay la shaqeyso.
Maanta, Suuqa Beereedka wuxuu leeyahay in ka badan 200 oo xubnood. Waxay ka kooban tahay wax soo saarka maxaliga ah iyo waxyaabaha caanaha laga sameeyo si ay u helaan hilibka cagaaran iyo jiiska, caafimaadka guud iyo qurxinta quruxda, qaxwada dabka lagu dubay, iyo dhuudhadhyo gluten la'aan ah oo isku dhafan. Xubnuhu waxay ku bixiyaan kareedhit ama kaararka biilasha iyagoo isticmaalaya nidaamka isdifaac ee fudud.
Mawduuca: Aasaasiyadeedka Minnesota, Miyiga
Ku wajahan dadka da'da ah, Mabaadiqda Gobollada waxay kobcisaa Jiilka soo socda Hogaamiyayaasha
Qaadashada fikradaha iyo ilaha si aad u caawiso West Central Minnesota Thrive
Qosolka Akhriska Xiriiryada Carruurta iyo Dadka waaweyn, Waxay dhistaa Akhrinta iyo Kalsoonida